DMCA Policy – JOOPZY
Waad codsan kartaa in lagaa qaado wixii alaab ah oo adigu adigu xaq u leedahay. Haddii aad ka hesho wax la mid ah halkaan ama lagu dhajiyay, waad nala soo xiriiri kartaa oo aad weydiisan kartaa saaritaan.
Waxyaabaha soosocda waa in lagu soo daraa sheegashada xad-gudubkaaga xuquuqda lahaanshaha:
1. Bixi caddaynta qofka idman ee loo idmaday inuu ku matalo milkiilaha xuquuq gaar ah oo la sheegay in lagu xadgudbay.
2. Soo bandhig macluumaad kugu filan oo kugu saabsan si aan kula soo xiriirno. Waa inaad sidoo kale ku dartaa cinwaan emayl sax ah.
3. Qoraal sheegaya in qofka cabanaya uu leeyahay aaminaad wanaagsan oo ah in loo isticmaalo sheyga qaabkii ay u dacwoodeen uusan oggolayn milkiilaha xuquuqda daabacada, wakiilkiisa, ama sharciga.
4. Qoraal sheegaya in macluumaadka ku jira ogaysiiska uu yahay mid sax ah, oo uu ku kacayo ciqaab been abuur ah, in qofka dacwoonaya uu awood u leeyahay inuu ku matalo milkiilaha xuquuq gaar ah oo la sheegay in lagu xadgudbay.
5. Waa inuu saxeexo qofka idman inuu ku matalo milkiilaha xuquuq gaar ah oo la sheegay in lagu xadgudbay.
U dir qoraalka ogeysiiska ku xadgudubka qoraalka emaylka:
Fadlan u oggolow 2 maalmood oo shaqo in meesha laga saaro waxyaabaha ku saabsan xuquuqda daabacaadda.